Ibhanti yePlastiki yeModyuli
Iibhanti eziguquguqukayo ezisecaleni
Iibhanti zeCwave eziMcaba
Iibhanti zokubaleka ezithe tye
Roller Top Iibhanti zePlastiki zeModyuli
Ibhanti yePlastiki yamatyathanga
Inyama (inyama yenkomo kunye nenyama yehagu)
Iziqhamo & nemifuno
Iziselo / Iibhotile
90 iDigri Transfer
Ukugcinwa kwempahla kunye noKwabiwa
Umtshini Woshicilelo Uphumile
Inkonzo & Isiqinisekiso
Inkonzo yodidi lokuqala
Ubude bebhanti kunye noxinzelelo
Iikhonkco zentsimbi kunye neeNgxowa zeHinge
Inkxaso yeNdlela yokuBuyisa
Yala okanye Yala ukuyila
Iibhanti zoMhambisi oJika
Isikhokelo sokumelana neekhemikhali
Izixhobo zesikhokelo se-backbend (HDM) zinokuqhotyoshelwa kwiibhanti zemodyuli ze-HONGSBELT®. Banokufaka isicelo kwisihambisi esityekeleyo ekufuneka sikuphephe ukuthatha iileyili zokubamba macala omabini.
Baxhoma kumzantsi webhanti ngengoma elula ukwenza inkqubo yothutho ethambekelayo kunye neradiyasi ye-backbend. Ukufakela iindiza kwibhanti eyongezelelweyo kwaye iya kuthutha iimveliso kuzo zonke ii-angles ngaphandle kweempazamo.
Iimveliso ze-serial ze-HONGSBELT® ziye zadlula yonke imilinganiselo yomgangatho wokucoceka kokutya kwi-FDA Inesakhiwo esilula kwaye ifake, ikhuphe kwaye ihlambe ngokulula. Konke ukutya okudibanisa amabhanti nako kukwazi ukufumana isiqinisekiso esikhulu sococeko lokhuseleko.
Ngokwesicelo esingqongqo ngokucoceka kokutya, zonke iimveliso ze-serial ze-HONGSBELT® zinokongeza i-antibiotic eyongezelelweyo. Ngaphambi kokongeza i-antibiotic ubuninzi be-colon bacillus kunye negolide ye-staphylococcus kwi-HONGSBELT® PE imathiriyeli kuphela ngamaxesha e-0.125 yebhanti ye-PVC. Emva kokongeza i-antibiotic, yi-0.1 amaxesha aloo nto ngaphandle kokufaka i-antibiotic. Isiphumo siya kuqhubeka ixesha elide, kwaye asiyi kulahlekelwa ngenxa yokwanda kwexesha.
Ixesha lokuposa: Sep-13-2021
Nceda usishiye kwaye sizakuqhagamshelana phakathi kwe-24hours.
IdilesiF7, Bldg A3, LongGang Innovative Software Park No.31 BuLan Road, LiLang, Shenzhen, China
Umthetho wabucala / Imimmiselo yokusebenzisa